မျက်မှောက်ရေးရာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 429
ဘယ်လိုလဲ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် တူမောင်ညို ၊ ဧပြီ ၁၇၊ ၂၀၁၂ ဧပြီ ၁၄ ရက်နေ့တွင် (NLD) ပါတီက သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံ “ကျမ်းကျိန်လွှာမှာပါတဲ့ စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကြံပြုစာ” ပေးပို့ခဲ့သည်။ “ဥပဒေနဲ့အညီပြင်စေချင်တယ်” လို့လည်း ပြောသည်။ စကားအသုံးအနှုန်းပြင်ဆင်ချက် အတည်ပြု မပြီးမချင်း ရွေးချယ်ခံထားရတဲ့ (NLD) ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်တွေ လွှတ်တော်ထဲ သွားမှ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ ပြောသံလည်းကြားရပါသည်။ နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေတွင်ပါရှိသော စကားလုံးကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က ပြင်ဆင်ပေးခဲ့သဖြင့် (NLD) ပါတီ က ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။ ဧပြီ၁ ရက် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ခဲ့သည်။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးသည့်နေရာ (၄၅) နေရာ အနက် (၄၃) နေရာ တွင် (NLD)...
လွိုင်ကော်မြို့ မှ ကယန်းလူငယ်လေး ခွန်ကောရီယို (Khun Kawrio) ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် NO Vote ကန်ပိန်းတွင် ပါဝင်ခဲ့သောကြောင့် မြင်းခြံထောင်တွင် ၃၇နှစ် ကျခံနေရတယ်လို့ရပါတယ်.. No tags for this post. Related posts No related posts.
BBC မြန်မာပိုင်း – www.bbc.co.uk/burmese ဧပြီ ၁၅၊ ၂၀၁၂ မြန်မာပြည်စစ်မျက်နှာမှာ တွေ့ရတဲ့ Spitfire တိုက်လေယာဉ်များ၊ လေယာဉ်မှူးများ (ဓာတ်ပုံ – getty images) ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီးအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံက ဗြိတိသျှစစ်တပ်တွေ ဆုတ်ခွာစဉ် မြန်မာနိုင်ငံ မှာ မြှုပ်ဝှက်ထားခဲ့တဲ့ ဗြိတိသျှ Spitfire တိုက်လေယာဉ် အစင်း၂၀ ကို မြန်မာအစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ပြန်လည် တူးဖေါ်ဖို့ No tags for this post. Related posts No related posts.
မကွေးမြို့ သင်္ကြန်စည်ကား၊ စီးပွားလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများမဏ္ဍပ်မှာ လူတဦး ဓာတ်လိုက်သေဆုံး မကွေးသား၊ မိုးမခ၊ ဧပြီ ၁၄၊ ၂၀၁၂ ဧပြီလ ၁၃၊ သင်္ကြန်အကြိုနေ့က မကွေးမြို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ၏ ဆုပေးမဏ္ဍပ်တွင် အသက် ၄၇ နှစ်အရွယ်၊ ကိုဆန်းလင်းသည် လျပ်စစ်ဓာတ်စီးနေသည့် သံဆူးကြိုးကို ထိကိုင်မိပြီး ဓာတ်လိုက်သေဆုံးသွားသည်ဟု သိရသည်။ ၎င်းနဲ့အတူ မြင်သာလမ်းတွင် နေထိုင်သော ကိုပြည့်ဖြိုးအောင် (အသက် ၁၉ နှစ်)လည်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
မိုးမခအထောက်တော် အမှတ် ဝဝ၁ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၁၂ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်သို့ ယနေ့ ရောက်ရှိလာသော ဒေးဗစ်ကင်မရွန်း မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ချမှတ်ထားသည့် ဥရောပနိုင်ငံတို့၏ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများ No tags for this post. Related posts No related posts.
အယ်ဒီတာ့လက်ရေး (၉ ) မောင်ရစ်၊ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၁၂ မြန်မာနှစ်ကူး အမေရိကန်ဘောလုံးသမား၏ မေတ္တာစာ ကြားဖြတ်အလွန် တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ပွဲ ပြီင်္းတော့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖလားပွဲ လား ဧပြီ ၁ မှာ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားပြီပေါ့။ ကာတွန်းရေးတဲ့သူဆိုတော့ ဘောလုံးပွဲနဲ့ပဲ နှိုင်းပြီး တွေးမိတယ်။ အခုဟာက ခြေစစ်ပွဲအောင်သွားတာ။ နောက် ၃ နှစ်မှာ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် ဖလားပွဲကို ၀င်ကန်ကြတော့မယ်။ ဆရာဦးဝင်းတင်နဲ့ အင်တာဗျုးတော့ ရယ်စရာတခုအနေနဲ့ မေးကြည့်ဖုို့ ကြိုးစားမိသေးတယ်။ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် ဖလားပွဲကို ကန်နိုင်ပြီဆိုတော့ ဘယ်တော့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖလားပွဲကို ၀င်ကန်နိုင်မလဲ … လို့။ အဝေးကြီးက လာရတာ၊ တနှစ်ကြာတယ် ခြေစစ်ပွဲအောင်ပြီဆိုတော့ သုံးသပ်ဝေဖန်တာတွေ အများကြီးထွက်လာတယ်။ အနှစ် ၂၀ ကျော်ကို အကျအဆုံးတွေ...
Page 429 of 447«1...427428429430431...447»